Maxkamada sare ee dalka ayaa joojisay xariga mayerkii hore ee magaalada nairobi | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Maxkamada sare ee dalka ayaa joojisay xariga mayerkii hore ee magaalada nairobi
Maxkamada sare ee dalka ayaa joojisay xariga mayerkii hore ee magaalada nairobi ee caasimada dalka mr George Aladwa oo todobaadkii hore ay xabsiga dhigeen saraakiil ka tirsan ciidanka police-ka magaalada nairobi.
George Aladwa ayaa lagu heestaa in todobaadkii hore uu ku hadaaqay falal ku saleysan kicinta shacbiga kenyanka aha xilli uu ka qeyb galayay xafalada maalinta maroodiyada oo lagu qabtay degaanka kipera oo ay u badan yihiin tagerayaasha isbaheysiga mucaardaka dalka.
Amar ka soo baxay maxkamada sare ayaa maalintii shalay waxaa xornimadiisa dib loogu celiyay siyaasigan oo lagu sii daayay si damaanad ah inta dacwadiisa la cadeynayo.
Maxkamada ayaa sidoo kale ciidamada police-ka kaga digtay in markale ay xabsiga u taxabaan merkii hore ee magaalada caasimada ku taal ee dalka.
Dhinacyada ay arintaan quseyso oo ay ka mid yihiin agaasinka dacwad oogaha guud ee dalka ayaa loogu baaqay in ay gudbiyaan racfaan ka qaadashada arintaan mudo afar iyo toban maalmood ah.